Iska ilaali qiyaanada kirada guryaha magaalooyinka waaweyn | Somaliska
Baaritaan uu sameeyay telefishinka SVT ayaa lagu soo bandhigay in sanadihii dambe ay aad u korortay tuugada ka qaraabada suuqa kala kireysiga guryaha, iyagoo dadka doonaya in ay guri ka kireystaan magaalooyinka waaweyn sida Stockholm iyo Göteborg ku sameeyay qiyaanooyin badan. Tuugadaan ayaa ah kuwo dadka u balan-qaadaya in ay guryo ka kireynayaan balse ay doonayaan in ay lacag ka qaataan oo keliya ka dibna la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Telefishinka ayaa soo bandhigay qisada haweenay qaxooti ah oo labo goor la qiyaanay, oo laga qiyaanay lacag gaaraysa 15000 kr ka dib markii loo balan-qaaday in guri laga kireynayo magaalada Göteborg oo xitaa la siiyay heshiis iyo furihii balse markii ay damacday in ay guriga soo booqato furihii la badalay isla markaana ay ugu timid gurigii oo dadkale ku noolyihiin. Tuugadaan ayaa la sheegay in ay qaasatan bartilmaameed ka dhigtaan dadka wadanka ku cusub ee doonaya in ay guri ka helaan magaalooyinka waaweyn ee ay aadka u adagtahay in guri laga helo.
Dhinaca kale, waxaa jira dad abuuray suuq madoow oo lagu kala iibsado guryaha kirada ah, iyadoo dadka qaarkood ay si suuq madoow ah ku bixiyeen lacag gaaraysa 70.000-100.000kr kuwaasoo loo soo dhameeyay heshiis gacan-koowaad ah oo si sharci daro ah lagu sameeyay. Magaalada Göteborg iyo Stockholm ayuu suuqaan yahay mid si firfircoon uga socda.
Hadaba haddii aad tahay qof doonaya in uu guri ka helo magaalooyinka waaweyn, haddii ay ahaan lahayd gacan-koowad iyo gacan labaad , iska ilaali qiyaanada tuugada oo ha bixinin lacag hor-maris ah. Isla markaana ka dheeroow suuqa madoow ee aan la aamini karin.
Cunsuriyiinta oo ku fashilmay doorashadii Denmark
Asc all aqyaarta ilahay sharta galada haka qabto muslimiinta meel kasta oo ay jogaan . qof muslim ahna uma banana in uu guxadbo qofkale muslim or non muslim